jeudi, 12 juillet 2018 21:58
Fianarantsoa: Vonona ny handray ny filoha mpitarika azy ny TGV eto an-toerana
Notanterarihana tao amin'ny Espace Royal Bateravola ny tolakandron'ity alakamisy 12 jolay ity ny famoriana ireo sampana mpanaradia ny antoko TGV ifotony.
Ny biraon'ny mpikambana mpanorina ny antoko eto amin'ny farintany no nitarika ny fotoana.
Fantatra tao anatin'izany fa eto Fianarantsoa no hamaranan'i Andry Rajoelina ny fitsidihana faritra izay tanterahiny amin'izao fotoana izao.
Nambata teto ihany koa fa ny 01 aogositra ho avy izao no hanatanterahana ny kongresy nasionalin'ny antoko ao an-drenivohitra.
jeudi, 12 juillet 2018 21:55
Farafangana: Manohy ny diany any atsimo atsinanana ny Pasteur Mailhol
Taorian'ny Manakara omaly, dia manohy mianatsimo atsinanana hatrany ny Pasteur Mailhol, izay efa nanambara fa kandida ho Filoham-pirenena.
Androany ity Filohan'ny antoko GFFM ity, dia nifamotoana tamin'ny vahoakan'ny Farafangana, izay nahavory olona marobe tokoa na dia efa maizina aza ny andro.
jeudi, 12 juillet 2018 15:36
Union Européenne: L’ambassadeur Benedito au terme de son mandat de quatre années à Madagascar
Antonio Sanchez-Benedito, quittera Madagascar au terme d’un mandat de quatre années. Il est venu faire ses adieux au Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, dans la matinée de ce 12 juillet, au Palais d'État d'Iavoloha. Il s’est déclaré satisfait et heureux de voir que ces quatre années ont donné une nouvelle impulsion aux relations entre les deux parties.
jeudi, 12 juillet 2018 15:11
Antsirabe: Nidina an-dalambe ny mpampianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatry ny Lisea Teknika
Tsy afa-po amin'ny fitakiana nataony ireo mpampianatry ny Lisea Teknika Antsirabe ka nidina an-dalambe ny andron'ny alakamisy 12 jolay 2018. Nialoha an'io moa dia nisy ny fivoriana niarahana tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra nanazavana ny tolona ataon'ny mpampianatra ka nahatonga ireo ray aman-dreny nanohana ny hetsiky ny mpampianatra io.
jeudi, 12 juillet 2018 14:52
Manohisoa-Betafo: Fiara 4x4 potika vokatry ny tsaho
Tsaho avokoa no niely tamin’ny tambazotran-tserasera omaly milaza fa misy Silamo manao trafika taova ao amin’ny tanàna atao hoe Antsahondra, Kaominina Manohisoa, Distrikan’i Betafo. Tanàna miorina an-kavoana i Antsahondra ary Malagasy, mpifindra monina no nanorim-ponenana ao efa ho efa-taona izao.
Ny mahatonga ny ahiahy dia ny fisiana 4x4 mivezivezy ao, fanorenana trano lehibe iray ka io no nisy nanely tsaho fa Mosquée. Notafihin’ny Fokonolona niaraka tamin’ny Zazamainty sy Zazamena (Andrimasompokonolona) tao Antsahondra omaly fa hoe : mangala-jaza ; vao avy nisy tovolahy mpiandry voalaza fa very saingy tafatsoaka ka tafaverina ny ampitson’ny nahaverezany ka ny fitantarana miendrika fijoroana vavolombelona nataony no nampirongatra ny hatezeran'ny olona, ka nampirohotra azy ireo hanafika tao Antsahondra.
jeudi, 12 juillet 2018 13:25
Toamasina: Tonga eto ny Kardinaly Tsarahazana Désiré
Fiaramanidina manokan’ny kaompania MTA no nitondra ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Nitsena azy teny Ambalamanasy ny Prefen’i Toamasina, ny lehiben’ny Faritra Atsinanana ary ny avy amin’ny Arsidiosezin’i Toamasina.
Misy ny karnavaly lehibe miazo ny Katedraly Ampasimazava misy toeram-piasana sy toeram-ponenan’ny Kardinaly Tsarahazana Désiré.
jeudi, 12 juillet 2018 13:24
jeudi, 12 juillet 2018 13:16
Toamasina: Fitsenana ny Kardinaly Tsarahazana Désiré
Nanomana fitsenana makotroka ny Kardinaly Tsarahazana Désiré ny mpino Katolika sy ny vahoakan'i Toamasina tamin'ny fahatongavany androany eto an-toerana.
(Jereo tohiny sary na Album Photo)